कलात्मक सुष्मा | के. एल. पीडित | Saugat : Naya Yougbodh
Filed Under: मनोरञ्जन
कलात्मक सुष्मा | के. एल. पीडित
27th December 2014	·0Comments
उनी कलाकी पारखी हुन् । कलामा रम्नु उनका लागि सर्वाधिक प्रीतिकर लाग्छ । कला उनको जीवनको एक सुन्दर ध्येय हो । उनका लागि कलात्मक भएर बाँच्नु जीवनको सर्वाधिक आनन्द र गौरवको विषय हो । कला नै जीवनको सार्थक मार्ग हो भन्ने भन्ने उनको अनुभूति छ ।
बीबीएस तेस्रो वर्षको परीक्षा सकाएकी सुष्मा केसी दाङको कला क्षेत्रमा बहुआयामिक प्रतिभाको रुपमा उदाएकी छिन् । नृत्य उनको विशेष रुचिको विषय हो । मोडर्न कल्चर नृत्यको प्रशिक्षकसमेत रहेकी सुष्माले दर्जनौं मञ्चहरुमा आफ्नो सिर्जनात्मक क्षमताको प्रदर्शन गरेकी छिन् ।
भर्खरै निर्माण सम्पन्न उहिले बाजेको पालामा चलचित्रको उनी सहायक नृत्य निर्देशक र ड्रेस डिजाइनर पनि हुन् । युनाइटेड मन्टेश्वरी विद्यालयकी नृत्य शिक्षक रहेकी सुष्मा राप्ती आर्ट स्कूलकी सञ्चालक र प्रशिक्षकसमेत हुन् । पछिल्लो पटक दाङमा नृत्यको संस्थागत विकासमा उनको प्रयास र योगदान स्तुत्य छ ।
केही वर्षअघि दाङको लमही क्षेत्रमा भएको जिल्लास्तरीय नृत्य प्रतियोगितामा प्रथम भएपछि उनमा नृत्य क्षेत्रमा लाग्ने उत्साह जागेको हो । शुरुमा घरपरिवारको पूर्ण सहमति नभए पनि अहिले भने त्यो अवस्था नरहेको सुष्मा बताउँछिन् । ‘शुरुमा नृत्य क्षेत्रमा लाग्दा घरपरिवारबाट उस्तो सहयोग मिल्दैनथ्यो । तर आजभोलि त पूर्ण सहयोग र समर्थन छ ।’ उनले थपिन् ।
दाङमा पछिल्लो समय नृत्य क्षेत्रमा उत्साहजनक माहोल छ । नयाँ पुस्ताको आकर्षण लोभलाग्दो ढंगले बढेको छ । समाजको दृष्टिकोण पनि क्रमशः फेरिदै गएको छ । यस कुराले नृत्य प्रशिक्षक सुष्मालाई निकै उत्साहित बनाएको छ । अब नृत्य क्षेत्र पनि बिस्तारै व्यावसायिक बन्ने उनले विश्वास लिएकी छिन् ।
घोराही–११ रतनपुरकी सुष्मा अहिले दाङमा निर्माणाधीन चलचित्र परीको सुटिङमा व्यस्त छिन् । यस चलचित्रको नायिका हुन् उनी । केही म्यूजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरेकी छिन् । नृत्य र अभिनयमा उनी जति बेजोड छिन् शारीरिक रुपमा पनि उत्तिकै सुन्दर औ लचकदार छिन् ।
चलचित्र उहिले बाजेको पालामाबाट उनले आफूलाई एक कुशल फेसन डिजाइनरको रुपमा पनि चिनाएकी छिन् । यो राप्ती क्षेत्रका लागि निकै उत्साहप्रद औ गौरवको कुरा हो ।
‘म भविष्यमा कुशल फेसन डिजाइनर बन्न चाहन्छु । यो क्षेत्रप्रति मेरो रुचि बढ्दै गएको छ । म सबैको सहयोग चाहन्छु ।’ सुष्माले आफ्ना रहर र आकांक्षा व्यक्त गरिन् ।
एक समयमा वकिल बन्ने सपना सजाएकी थिइन् सुष्माले । तर आर्थिक अभावका कारण उनको त्यो सपना तुहियो । यद्यपि उनी कहिल्यै हतप्रभ भइनन् । जीवनलाई सपना र सम्भावनाको खोजीको रुपमा ग्रहण गर्दै उनी निरन्तर अघि बढिरहिन् । आज कला क्षेत्रमा उनले एउटा लोभलाग्दो परिचय र हैसियत बनाएकी छिन् ।
‘आज म खुशी छु, उत्साहित छु । कला मेरो जीवन बनेको छ । मेरो गौरव बनेको छ । म निरन्तर कला क्षेत्रमै समर्पित हुनेछु ।’ सुष्माले जीवनको लक्ष्य बताइन् ।
उनलाई यो उत्साह, गौरव र आनन्द हरपल मिलिरहोस्, शुभकामना ।